Mfundisi - ubuthishela esiyingqayizivele. Eqale endulo namanje abaluleke kakhulu futhi ethandwa. Iba uthisha noma uthisha kwanoma yisiphi isihloko kungaba ezikhethekile SSUZ Pedagogical namanyuvesi. Omunye ezikoleni - kungcono Amur Othisha College, elise Blagoveshchensk. It namuhla futhi sizoxoxa.
Othisha College Blagoveshchensk - isimo abasha, izikhungo ezizimele. Yavela 2005 ngenxa nokuhlanganiswa amakolishi eziningana ezikhona. Kuhlelwa Kabusha zabhekana ukuqeqeshwa othisha ezisebenza Blagoveshchensk. Kulesi senzakalo saphawula ukuqala ngokufunda umlando sokufundela yesibili.
Ngo-2014 kwaba khona omunye shintsho olubalulekile. By College of Education isananyathiselwe Annunciation College of Sekutivocavoca. Ngenxa yalokho, lesi sikhungo useshintshe igama. Sekube ekolishi lase-Amur emkhakheni Uthisha nemfundo ngokomzimba. Ngo-2015, izinguquko futhi. I ekolishi ngasibuyisela igama yayo yangaphambili.
Ilayisensi kanye nokwenziwa kube semthethweni
Abafundi abaningi ukuba ungenele lase-Amur Othisha College Blagoveshchensk ebuzwa ukutholakala ilayisensi futhi isitifiketi isimo sokugunyazwa lesi obakhathalelayo. Kusuke kufanele kube njalo. Lezi imibhalo ezibaluleke kakhulu kwanoma iyiphi isikhungo sakho semfundo. Ilayisensi ikuvumela ukuba bafeze imisebenzi emkhakheni wezemfundo kanye isitifiketi ngokuvumela ukukhipha amadiploma isimo futhi ahlinzeke phefu kusukela abafana ibutho.
Ilayisensi Amur Othisha College yakhishwa ngo-Ephreli 2015. Kuyinto ephakade. Isitifiketi ssuz wayebuye ngo-Ephreli 2015. Ukuhlola ngokuqinisekisa kwale dokhumenti liyokuma kuze kube sekupheleni May 2020.
Uma sihlaziya ubufakazi, kungashiwo baphetha ngokuthi amakolishi eziqinisekiswe 6 amaqembu ihlanganiswe amakhono:
Wezenhlalakahle futhi Sociology;
isayensi Pedagogical nemfundo;
ezemidlalo kanye nemfundo ngokomzimba;
esihle futhi isicelo art amafomu.
Amur Othisha College igxile ukuqeqeshwa eliphezulu. Kule ndaba, uye wadala izinto zanamuhla futhi base lobuchwepheshe. Emakilasini, laboratories kanye nemihlangano yokufundisa Inama-computer, monoblocks, namaphrojektha, whiteboards interactive, ama-TV, umile muffle amaziko, isondo yombumbi, nokunye. D.
ukunakwa Omkhulu sakhokhwa imitapo. Ngo ekolishi, zazo zikhona ezine. Sinenkosi imfundo, isayensi, inkomba, eqanjiwe, nakomagazini, ulwazi izinto. amakamelo ukufunda ukusebenza umtapo. Basuke Inama-computer nge-Internet.
Kodwa hhayi kuphela kwi ukuqeqeshwa ibheka College. Ukuze amakhono yesibili kusabalulekile impilo abafundi. Yingakho kudalwe futhi base lobuchwepheshe zinama kahle ezemidlalo, ukufaneleka, ukuzivocavoca. Ukutholakala iyona ebaluleke kakhulu imishini ezemidlalo. Kuba yisikhathi futhi lapho igumbi ukubhucunga ekolishi.
Amur Othisha College MEMA ukuqeqeshwa abathweswe iziqu 9 futhi 11 emakilasini. Nge ifomu jikelele eziyisisekelo ungakwazi uqhubekele umsebenzi elandelayo:
"Ukufundisa amakilasi aphansi";
"KweziMilo Pedagogy e imfundo yamabanga aphansi";
"Osetshenziswayo Computer Science";
"Ukudweba kanye Fine Arts";
"Handicrafts futhi kwezobuciko okuhlobisa";
"Isiko ngokomzimba eguquguqukayo".
Abantu usuqede amakilasi 11, kakhulu mancane amathuba okuthi ukhetha. Bona ssuz izipesheli bonke amakhono 3:
Ukungena ukuhlolwa nemibandela yokwemukelwa
Faka Amur Othisha College kwedolobha Blagoveshchensk kulula ngoba akukho izivivinyo kuyinkimbinkimbi izicelo akudingeki ukuthatha. Uma isicelo se-abasebenzi ekolishi kungukuthi ebuka imiphumela ukuhlolwa. Yokungena izivivinyo asethwe kuphela ezinye amakhono. Ngakho, iza "imfundo Umculo" enikela umsebenzi ukuhlola idatha umculo. Abafakizicelo abakhetha "Umdwebo futhi Fine Arts" futhi "Handicrafts futhi kwezobuciko okuhlobisa", isandla umdvwebo. On "Isiko Physical" emnyango test kuyisiyalo esiyisa ezikhethekile ezingokomzimba, kodwa "eguquguqukayo Physical Emkhubeni Wokubulala" - ukulungiswa jikelele ngokomzimba.
Ngakolunye amakhono Awekho Luhlolo yokungena khona. Uyasho ngokuphelele zonke izicelo uma inani izicelo ayeqi inani lezihlalo. Uma lesi sifo hhayi kuhlangatshezwene nazo, bese izisebenzi ekolishi sibheke izitifiketi engenayo. Amalungu ekomiti Ukukhetha ibalwa amaphuzu isilinganiso idokhumenti, ukubhalisa labo abantu abanale sibalo njengoba eliphezulu ngangokunokwenzeka.
Amur Othisha College: simo uhlu sokungena
Ngesikhathi ethola imibhalo wokwamukela hhayi izikhulu ongamtshela ukuthi noma isicelo esithile ibhaliswe ekolishi. A umphumela umkhankaso ezethula, singaxoxa ngemva simo uhlu ukuhlaziywa. Kubo labelwe ikhasi elibalulekile kwi website esemthethweni.
Ukutlolisa Othisha College Blagoveshchensk, lase-Amur Isifunda kufanele zisekelwe izihlalo etholakalayo. Inani labo ivunyelwe ngonyaka. On isiko ngokomzimba, njengoba umthetho, thatha abantu 75 ngesisekelo 9 futhi 11 emakilasini. Ukutlolisa inani abantu 50 ihlelelwe okukhethekile "Ukufundisa amakilasi aphansi". On kwezinye izindawo iqoqo abantu 25 kuya 35.
Ngakho, ungesabi ukungena Amur Othisha College. Lesi sikhungo umphakathi, elise Blagoveshchensk, has konke okudingayo ukuze ukuqeqeshwa izinga maphakathi no-level ochwepheshe. Kusukela izindonga izikole eziningana ezikhethekile yesibili ushiye abathweswe iziqu eziningi, abaningi babo manje usebenza amakhono abo.
Chernihiv kaZwelonke Technological University (CHNTU): incazelo, amandla
Thenga i-diploma ye imfundo ephakeme
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi Decarbonizer piston izindandatho?
Izwe Turkey. umnotho eTurkey. Flag of Turkey - isithombe